एलोन मस्कले टेस्ला र स्पेसएक्स फेसबुक पृष्ठ बन्द गर्दछ ग्याजेट समाचार
एलोन मस्कले टेस्ला र स्पेसएक्स फेसबुक पृष्ठहरू बन्द गर्दछ
ईडर एस्टेबान | | हाम्रो बारेमा, सामाजिक नेटवर्क
फेसबुक र क्याम्ब्रिज एनालिटिका कांड यस्तो लाग्दैन कि यो कुनै पनि समयमा चाँडै अन्त हुनेछ। सामाजिक सञ्जालले गोपनीयता उल्ल .्घनको परिणाम र यी कार्यहरूको भएका छनौटहरूमा सम्भावित प्रभावको अनुभव गर्न जारी राख्दछ। त्यसकारण, उनीहरूले आफ्नो सेयरहरू प्लमेट देखिरहेका छन् र कति प्रयोगकर्ताहरू सामाजिक नेटवर्क छोड्ने निर्णय गर्छन्। ती मध्ये अन्तिम एलोन कस्तूरी.
यद्यपि यो एक ठट्टा जस्तो देखिन्थ्यो, रटेस्ला र स्पेसएक्सका निर्माताले दुबै व्यवसायको सामाजिक नेटवर्कमा पृष्ठहरू बन्द गर्ने निर्णय गरे। ट्विटरमा एक प्रयोगकर्ताले त्यसो गर्ने हिम्मत नभएको बताए पछि उनले त्यसो गरे। तर वास्तवमा, एलोन कस्तूरीले हिम्मत गर्‍यो।
केहि मिनेट पछि यो देख्न सकिन्छ कि टेस्ला र स्पेसएक्स दुबै पृष्ठहरु फेसबुकबाट कसरी हराए। दुबैका २० लाख भन्दा बढी अनुयायीहरू थिए। तर अब तिनीहरू अवस्थित छैन। प्रयोगकर्ताहरूले केवल त्यस्ता पृष्ठ अवस्थित नभएको सन्देश देख्नेछन्।
मैले महसुस गरिन कि त्यहाँ एक छ। काम चल्छ।
- एलोन मुस्किल (@elonmusk) मार्च 23, 2018
यद्यपि सामाजिक नेटवर्कसँग एक विकल्प छ जुन तपाइँलाई पृष्ठ असक्षम गर्न अनुमति दिन्छ तर यसको प्रकाशनहरू वा यसका अनुयायीहरू गुमाए बिना। त्यसो भए यो हुन सक्छ कि एलोन मस्कले यस विकल्पको लागि छनौट गर्‍यो। तर वास्तविकता यो छ कि तपाईं फेसबुकमा टेस्ला र स्पेस एक्स पृष्ठहरू देख्न सक्नुहुन्न।
सिद्धान्तमा, यो एक सानो कार्य जस्तो देखिन्छ। तर, अधिक र अधिक महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू सामाजिक नेटवर्कको बहिष्कारमा सामेल भइरहेका छन्। ट्विटरमा, #Seletefebook ह्यासट्याग धेरै दिनका लागि ट्रन्डि topic विषय भएको छ। हामी देख्छौं कि हजारौं व्यक्तिहरू सामाजिक नेटवर्कबाट थाकेका छन् र उनीहरूको खाताहरू बन्द गर्छन्। साथै केही व्यवसायहरू।
एक शक बिना, फेसबुकको छवि यस घोटालाले नराम्ररी क्षति पुर्‍याएको छ। थप रूपमा, मार्क जुकरबर्गको प्रतिक्रिया ढिलो भएको छ र यो पर्याप्त भएको छैन। त्यसोभए हामी यो कथा कसरी विकसित हुन्छन् त्यसमा सतर्क हुनुपर्दछ। किनकी सामाजिक नेटवर्क आज यसको सब भन्दा महत्वपूर्ण पल बाट गइरहेको छ। के तिनीहरू यसबाट बाहिर जान्छन्?
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » हाम्रो बारेमा » एलोन मस्कले टेस्ला र स्पेसएक्स फेसबुक पृष्ठहरू बन्द गर्दछ
उबरसँग दुर्घटना हुनुभन्दा पहिले नै यसको स्वायत्त कारहरूमा समस्याहरू थिए
यो नयाँ सामसु Galaxy ग्यालेक्सी J7 प्राइम २ हो